Ku dhawaad 10 qof oo shaqaale rayid ah oo dhintay, kadib Weerar Bariga Afgaanistaan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ku dhawaad 10 qof oo shaqaale rayid ah oo dhintay, kadib Weerar...
Ku dhawaad 10 qof oo shaqaale rayid ah ayaa la dhintay, kadib markii koox hubeysan ay rasaas ku fureen dad shacab ah Bariga Afgaanistaan fiidnimadii Jimcaha. Kooxda dilkaan geystay ayaa rasaasay dadkaan, xilli ay ku sugnaayeen goob suuq ah.
Dhinaca kale haweeney dhaqtar ahayd ayaa la dilay, kadib markii Gaarigeeda bambo Looga xirey, xili la sheegey in ay ku siijeedey isbitaalka gobalka sida uu warbaahinta u sheegey Afhyeenka Xafiiska Gudoomiyaha Gobalkaa Nangahaar.
sidoo kale Tani waxaa ay imaaneysaa iyada oo wadahadalladii nabadeed ee Afqaanistaan ​​ayaa dib uga bilaabmaya magaalada Doha iyadoo Mareykanku uu dib u eegis ku sameynayo heshiiskii Taalibaan.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo goordhow gaarey Boosaaso oo habeenkii xalay Al-Shabaab weerar ku qaadeen xabsiga wayn ee magaalada
Next articleDabageed oo shaqo Joojin ku sameeyet Wasiirka arimaha Gudaha Soomaliya
BREAKING. Xoogaga Tigray oo la wareegay magaalooyin hor ah
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 20, 2021 0
BREAKING. Xoogaga Tigray' ayaa sheegay inay la waregeen' dhawr magaalo oo kuyaalo' Xuduuda Degaanka Axmaarada iyo Tigray' kuwaaso waliba dhaca dhinaca Axmaarada. Magaaloyinka soketa- woldiya- koba'...
Maxaa u sabab ah wada shaqeyn la aanta Laamaha Amniga iyo...
Nin ku hubeysan Toorey oo weeraray dad sallaada u taagnaa xaafadda...
Midoowga Musharaxiinta oo soo dhaweeyey magaacabida Jubbaland iyo Puntland gudiga Doorashada
Madaxweynaha Xilka ka dhamaaday oo weerar ku ah Guri...
Yurub oo albaabada ka xiratay Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo...
Kim Jong Un Qaabkee u nool yahay hogaamiyaha aadka looga...